Mabhuku pasherufu yemabhuku. Nyaya nevanyori vezuro, nhasi nekusingaperi | Zvazvino Zvinyorwa
Starts April mumamiriro ezvinhu akaoma uye asina chokwadi kuti nyika yekutsikisa inotamburawo. Mumwedzi webhuku iyo zvinosungirwa kugara pamba zvakaita kuti titarise masherufu, kune vese avo vanga varipo kubva zvatinoyeuka. Masherufu akazadzwa nemakopi ayo matunhu atakatokanganwa. Mabhuku emadzibaba edu kana iwo atanga tichiwana. Mabhuku atove havana muridzi nekuti ivo ndevevose uye ndevamwe veimba. Mabhuku angangodaro hatisati taverenga, kunyangwe ndichivaona ipapo hupenyu hwangu hwese. Mabhuku yeunganidzwa akangwarira kana muhomwe. Ichi chi kudzokorora kwevamwe kubva kwavari. Ivo imba yangu, asi vanogona kuva chero munhu zvakare. Y vanogara vachiperekedza. Muhondo nerunyararo.
1 Zvakaunganidzwa zvekare
1.1 Zvakakosha zvekare
2 Zvishoma pane zvese
Salvat, Alliance, Mill, Readers 'Circle, Sachigaro, Austral... Chero chavo chakaburitsa muunganidzwa wakanyanya kana kushoma. Mumba mangu - uye zvirokwazvo mune yevakawanda - ndiye anonyanya kuzivikanwa naSalvat, ane zvekare zvezvinyorwa zvepasirese. Kune mamwezve e Christie Agatha, mune rake rakakurumbira muhomwe muunganidzwa, iyo yaive iyo yeWedhiyo Molino. Kana izvo zveAustral, kunyanya mazita e Vanyori veSpanish. Homwe yake Don Quixote ndeye yakagadziriswa kodhi prodigy, asi imwe isingatomboverengeke Ivo vanga vachivandudza editions, asi ivo vakasiya iyo yakafanana dhizaini.
Kunyangwe iyo magazini, ikozvino yechinyakare futi, yaive iyo ye Sarudzo kubva kuRaveer's Digest (chiri kushanda), Yakaparura chinyorwa mumabhuku fomati yemanoveli kana nyaya, senge iyo yaunoona ipapo, iyo yaisanganisira Dziva reropa, imwe yenyaya pfupi dzePlinio naFrancisco García Pavón, kana Love Story rakanyorwa naErich Segal.
Kunyanya kutaurwa ndee zvakagadzirwa zvakaomarara, zvakaunganidzwa zvakaoma, ine iro sepia rinorema kana rakapetepa chaizvo bepa, uye yakanaka yemukati edition. Ivo vaiwanzo kuitirwa akadaro epasirese echinyakare seiyo Kubwinya de Goethe, mabasa akanakisa e Molière kana vanyori vakuru veRussia vakaita Gorky.
Ivo havasi kushayikwa pasherufu kana mumba. Mune chero shanduro uye fomati.
Iwo akasarudzika ngano e Bocaccio, yakasarudzika zvino, uko rimwe denda rinoparadza nyika. Ndiani anoziva kana ikozvino dzimwe nyaya dzinozove iyo Decameron yezana ramakumi maviri nemasere haisi kunyorwa - kana kutaurwa.
Kana pasina Tolstoy pasherefu, hapana shefu. Uye kana zviripo, inyaya ye Countess Ana Karenina kana mukuru Hondo nerunyararo. Ini ndoda kuverenga Vronsky kupfuura kurova mhangura muAusterlizt, chaizvo.
Kana kuti inogona kushayikwa Graham greene. Nezita iri kana nekuzivana Kumukira papurazi, naGeorge Orwell, uyo aripowo, isu tinoisa mugove wemanovelisi ane chakakomba-chemagariro chinhu.
Jules Verne Iwe unogona kuzadza pasherefu yakazara nemanovhosi ako. Uye iyo nyaya yemutumwa akashinga weTsar ndeimwe yeanonyanya kufadza.
Don Lope de Vega yakasiya kuchema, iyo yaive nhoroondo, yevanhu vese vachichema vachipesana nekushandiswa zvisizvo kwesimba. Asi iye zvakare akasiya mamwe ma comedies ekugadzirira, senge Mukadzi akapusa o Imbwa iri muchidyiro.
Iyo yeVamwari Vemitambo
Uye kuvhara neimwe yeItaly classic, tichagara tine Dante Alighieri uye kudzika kwavo kusingaperi kugehena, kutiyeuchidza kuti ivo vachiripo.
Zvishoma pane zvese
Kubva kuna Kama sutra a kuenda nemhepo, achipfuura VaCapone havapo pamba. Ndima dzaFederico García Lorca neavo ve Ballads Spanish kana neiyo Satyricon. Kufamba ne Nzira yaDon Quixote de Azorin neminda yeCastilian ye Machado. Matambudziko e Dhayari remudyandigere yeDelibes uye nenjodzi dzesaga ye Iye Dukay yakarohwa naLajos Zilahy. Kana huzivi hwe Iko kutsoropodza yaJaime Balmes anogara neiyo ingangoita autobiography uye muyenzaniso weiyo Objectivism ye Ayn Rand en Avo vanorarama. Mazana enhau kusarudza kubva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku pasherufu yemabhuku. Nyaya nevanyori vezuro, nhasi nekusingaperi
Maria Rosario akadaro
Ini ndinogara ndichiverenga "Zvazvino Zvinyorwa" nechido chakakura, ndosaka ndichikurudzirwa kutsvaga zita rekuti nhasi randibata, "Kupandukira papurazi": hazvisi naGeorge Orwell? Handizvione sezvakanyorwa naGraham Greene ...
Pindura María Rosario